साथीले भन्यो, ‘उ हेर यो कम्पनिमा नेपाली रहेछ । जाँउ न कुरा गरौ ।’ हामी त्यो नेपाली साथीको छेउमा पुगेर बोलायौँ । ‘भाई, के छ हाल खबर ?’ नेपालीबाट बोलाउदा त्यो भाईलाई पनि आफ्नै मान्छे भेटे जस्तै खुशी र अचम्मित मुद्रामा गर्दा गर्दैको काम टक्क छाडेर मन्द मुस्कान छर्दै भन्यो, ‘हजुर ? ठिकै छ दाई ।’ ‘नाम के हो नि भाईको? अनि नेपाल कुन ठाउँ हो नि ? कति भो कोरिया आको?’ मैंले एकैचोटी सोधें, ‘मेरो नाम कृष्ण भट्टराई हो। घर गुल्मी । कोरिया आएको एक वर्ष भयो दाई ।’ मसँगै गएको साथी पोखराको भएकोले उसले सोधिहाल्यो, ‘गुल्मी कुन ठाउँ हो ? म गुल्मी जिल्ला पुरै घुमेको छु ।’ ‘गुल्मी सत्यवती गाउपालिका हो’, भाईले भन्यो । ‘अनि, दाईहरु चाही?’ हामीले पनि हाम्रो पनि एक एक गर्दै परिचय दिन थाल्यौं ।
हामीलार्इ अझ थप उसको काम, दाम, साहु र नाइकेको कार्य स्थलमा हुने व्यवहारबारे जान्न मन लाग्यो र सोध्दै गयौं । हेर्दा कलिलो अनि जिउड़ाल पनि पातलो देखेर ती भाईको उमेर पनि सोधिहाल्यौं । भर्खर २१ वर्षका भएछन् । ‘ओहो !भाई , यति सानै उमेरमा किन विदेश आएको त? अहिले त पढने पढ्ने उमेर पो त । कति पढेका छौं?’, हामीले फेरी सोध्यौं । उनी आफ्नो कामलाई निरन्तर दिदै भने, ‘दाई, नेपालमा जति पढे लेखे नि के गर्नु जागिर पाईदैन । आखिर बिदेश जानै पर्छ । त्यो भन्दा सानै उमेरमा टन्न पैसा कमाउने र आफ्नो सपना साकार पर्ने भन्ने उदेश्यले कोरिया आएको हो । कोरियामा महिनाको लाख लाख कमाइ हुन्छ रे सबै साथीहरु बिदेश गए त्यसैले म पनि यता आए ।’
उनी पहिलो पटक कोरिया प्रवेश गरेर कम्पनिमा जाँदा त्यहाँ पहिलादेखि नै काम गरिरहेको अरु नेपालीहरु पनि थिए । काममा लागेको दोस्रो दिन उनीसँगै काम गर्ने दाङ्को रामु सिङ् भन्ने एक जना साथीलाई काम अराउने नाइकेले स्टोरमा केहि सामान लिन पठाएछ । ऊ छिटो नआएकोले नाइकेले त्यो भाईलाई कोरियन भाषामा भनेछ, ‘रामुहागो खाची गास मुलगनन पाल्लि खाचिगो वा ‘ (रामु संग गएर छिटो सामान लिएर आउ )।
उसले ‘ने आल्गेस्सुम्दिा!’ ( हस हजुर) भन्दै बाहिर गएर चारैतिर खोज्न थालेछ । काठको टुक्रा कहिँ कतै नदेखेपछि भित्र गएर नाइकेलाई भने छ. ‘नामु अब्सयो’ (काठ छैन) । नाइकेले झर्केर उल्टै सोधेछ, ‘म्हरागो ? नामु अब्स ?’ (के भन्छ? काठ छैन रे?) नाइके रिसले चुरमुरिदै अर्को सँगै काम गर्ने नेपाली साथीलाई सोध्न लगाएछ । भाषा बुझ्ने नेपाली साथीले मुसुमुसु हाँस्दै भनेछ, ‘ए भाई, तिमीलाई स्टोरमा रामुसंग गएर सामान पो छिटो ल्याउ भनेको के को काठ खोजीरा ।’ त्यसपछि पो बल्ल थाहा भयो नेपालमा सिकेको भाषाले कतिको काम गर्दो रहेछ भनेर उसको पहिलो अनुभव सुनाउदा हामी पनि हाँसो थाम्न सकेनौं ।
Previous बेरोजगारको फारम भर्नु कि जापान कोरियाको लाइनमा उभिनु ?
Next बुझ्नेलाई यो कुरो गहिरो छ,नबुझ्निलाई घरछेउमै पहिरो छ…कोरियामा नेपाली मजदुरको वास्तविक अवस्था